2009 ဟွန်ဒါ CB1000R လမ်းမကြီးစမ်းသပ်ခြင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း- ဟွန်ဒါ CB1000R မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
နေအိမ် → ဟွန်ဒါ → 2009 ဟွန်ဒါ CB1000R လမ်းမကြီးစမ်းသပ်ခြင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း- ဟွန်ဒါ CB1000R မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
20 ဇွန် 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် 2009 ဟွန်ဒါ CB1000R လမ်းမကြီးစမ်းသပ်ခြင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း- ဟွန်ဒါ CB1000R မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
2009 ဟွန်ဒါ CB1000R - လမ်းမကြီးစမ်းသပ်မှုတားမြစ်ပျော်စရာ: သငျသညျမဝယ်နိုင်အကောင်းဆုံးဟွန်ဒါ!
အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ကောင်းတဲ့ရဟတ်ယာဉ်ကိုတည်ဆောက်ဘို့ဟွန်ဒါဖို့ကျားကန်. ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုအစဉ်အဆက်အလွယ်ကူဆုံး-to-စီးနင်း Full-size ကို Two-ဘီးတဦးဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်တစ်ခု Auto-Trans-တပ်ဆင်ထားမော်တော်ဆိုင်ကယ် / Scooter ကဲ့သို့သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိရိယာတစ်ခုပေးခြင်းများအတွက်ဗိုလ်မှူးအကြွေး.
ဒါပေမဲ့, ရိုးရိုးသားသား, ဟွန်ဒါ, သင်သည်အဘယ်ကြောင့်အကြှနျုပျတို့ကိုထုတ်ကိုင်ပြီးနေကြတယ်?
စည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဥရောပတိုက်တွင်ယင်း၏နိဒါန်းပေါ်မှာ CB1000R ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်. တကယ်တော့, ဒီ CBR1000RR-based အဝတ်အချည်းစည်းစက်ဘီး 2008 ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစက်ဘီးစီးတစ်နှစ်တာမဲပေးအတွက်ဒုတိယပြီးဆုံး, အဆိုပါ U.S နှင့်ကျွန်တော်. သူစက်ဘီးဆုံးရှုံးနေကြပင်ထိုသို့မဲပေးရမပြုခဲ့!
ဥရောပကျမ်းပြုဆရာထံမှတချို့ကမှတ်သားလောက်ကိုးကား? အချည်းစည်းအမျိုးအစားထဲမှာဟွန်ဒါအတွက် "တစ်ဦးကဧရာမခြေလှမ်း,"ဆိုင်ကယ်ယမ်ကပြောပါတယ်. "ရှင်းနေသည်မှာယင်း၏အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောအင်ဂျင်နှင့်အတူပြိုင်ဘက် outshines, good brakes and sharp handling.”
Editors at Belgium’s Motor Wereldwere equally full of praise, သူတို့တစ်တွေယူထားတဲ့စတင်မှပယ်ရလျှင်ပင်: "နံပါတ်များခုနှစ်တွင်, အဆိုပါ CB1000R သင်တို့ခြေအောက်၌ကနေကော်ဇောခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့ကြောင့်ဆိုင်ကယ်၏အတိအကျမျိုးမဟုတ်ပါဘူး. ဤသည်အင်ဂျင်နှင့်ကိုယ်ထည်နှစ်ဦးစလုံးသက်ဆိုင်ဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, သင်တစ်ဦးထုမျှမျှတတဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါရဲ့အငယ်ဆုံးအဝတ်အချည်းစည်းအမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသည်ရုံသောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်စေသည်စီးနင်း; တိကျသောအထိဖြည့်စွက်တဲ့ချိန်ခွင်လျှာ, လွယ်ကူပြီးပျော်စရာကိုင်တွယ်. တစ်ဦး torquey အတွက် factor, အဲဒီမှာချိုမြိန်-running အင်ဂျင်နှင့်ထိုသို့, thenaked bike of the year.”
It’s definitely re-engineered, လွန်း. All you have to do is look at the intake setup, which is nearly horizontal, rather than the steep downdraft used on the CBR. Throttle bodies for the PGM-FI are 36mm, down significantly from 44mm, and compression is lower byafull point at 11.2:1.
End result of these changes isaclaimed output of 123 horses at 10,000 rpm ပါနှင့် 74 မှာ torque ၏ခြေလျင်-ပေါင် 8000 revs, putting it in the ballpark with other bikes in the one-liter naked/streetfighter class.
Really going at it in the Alps is typically not the recommended procedure. On the higher passes, there is alwaysalot to be wary of, from cows (and their waste products) on the road to buses, rubbernecking sightseers in the most underpowered compact cars you’ve ever seen, cyclists and just about anything else you wouldn’t want to run into atafull 10/10ths clip. ဒါကြောင့်, an attenuated “Alps Pace” takes it backanotch to allow forasafety margin but remains swift.
While this isasuperb sporting engine, almost more amazing is its smoothness and tractability. I literally let the bike idle through towns in sixth gear, running withoutahiccup with no throttle at 1200 rpm and less than 20 တစ်နာရီမိုင်, and then could roll on the gas and pull smoothly away. Don’t try that on yourKTM Super Duke,Ducati Monster V-TwinorBuell 1125CRnaked bikes!
It would beashame to putapowerplant like this in anything less than an excellent chassis. There is no shame here! This standard has pretty standard geometry, with classic 25-degree rake working with 4.0 inches of trail. Wheelbase isareasonably compact 58.9 လက်မ.
Braking, လွန်း, was impressive. Our ABS-equipped bike has the linked setup that usesapair of three-piston, sliding-pin calipers at the front, withatwo-piston sliding-pin unit at the rear. (These are “conventional” ABS brakes, not thenew CBR-RR supersport type.) Braking feel is good but not excellent. Back home, we briefly tried and liked the four-piston front calipers (as used on the standard CBR1000RR) of the non-ABS model.
နေဆဲ, stops on the ABS bike were sure and utterly consistent, and even with the linked setup, it was easy to drag the rear brake lightly on first-gear hairpins to settle the bike and tighten the cornering line. Bridgestone BT015s (120/70ZR17 at the front and 180/55ZR17 at the rear) offered good grip, even in less than perfect riding conditions.
Claimed full-fuel-tank curb weight for our Combined-ABS testbike is 489 အလေးချိန်ပေါင် (478 for non-ABS). Subtract about 28 pounds for gas and you get 461 အလေးချိန်ပေါင်. Itlookslighter than this and definitely rides lighter.
Well, we concur on everything but the price. Because the unfortunate part of the equation for us is that this bike was conceived in Europe for Europe, and manufactured by Honda Italy. The previous 599 နှင့် 919 also came from the same background.
While the 919 was competitively priced if rather sedately styled, အဆိုပါ 599 was quiteabit more expensive than competing machines. At the current exchange rate, CB1000R pricing in Europe (excluding the Value Added Tax) is running about $11,200 for the standard bike and $11,700 for the C-ABS model. With competing bikes like theYamaha FZ1andTriumph Speed Triplecoming in under $10,000 over here, it appears the economic argument for bringing in the CB1000R might bealittle tough.
But this is the kind of modern, sporting Universal Japanese Motorcycleacompany such as Big Redshouldoffer in the U.S. ဒါကြောင့်, American Honda, please make itagood argument! Don’t hold out on us: We need this bike…
Honda CB450 – ဗီဒီယိုကိုစွယ်စုံကျမ်း
တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် Ducati 60 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down စမတ် eScooter ဟွန်ဒါ DN-01 ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို ဆူဇူကီး AN 650 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Ducati Desmosedici GP11 တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် Moto Guzzi 1000 Daytona Injection ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Ducati Diavel Brammo Enertia Bajaj Discover စက်ဘီး Kawasaki ER-6n Aprilia Mana 850 ဆူဇူကီး Colleda CO ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး